Anguilla dia manolotra fepetra vaovao hisorohana ny fiarovana ireo mponina ao an-toerana sy ireo mpitsidika
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Anguilla dia manolotra fepetra vaovao hisorohana ny fiarovana ireo mponina ao an-toerana sy ireo mpitsidika
IZY Ny Governora sy ny Hon. Ny praiminisitra Anguilla dia namoaka fanambarana iraisana momba izany Covid-19, manasongadina ny fanoloran-tenan'ny governemanta tsy miovaova amin'ny fiarovana ny fiarovana sy ny fiadanan'ireo mponina rehetra.
Tsy mbola nisy ny trangana COVID-19 (virus Novel Corona) ao Anguilla hatreto. Na izany aza, manoloana ireo fivoarana farany manerantany, ireto fepetra manaraka fanampiny sy fisorohana vaovao eto amin'ny seranan-tsambo fidirana ireto dia nankatoavina tamin'ny fivorian'ny fivorian'ny filankevitra ambony mba hiarovana amin'ny fandrahonana amin'ny tranga nafarana.
Ny fanidiana ny seranan-tsambon'i Anguilla rehetra - ny ranomasina sy ny rivotra - mandritra ny 14 andro ho an'ny fihetsiky ny mpandeha rehetra.
Hiditra am-kery manomboka amin'ny 11:59 alina amin'ny zoma 20 martsa (fotoana Anguilla). Tsy tafiditra ao anatin'izany ny fivezivezen'ny entana.
Ireo olona rehetra tonga ao Anguilla izay efa nitety ny faritra ivelan'ny faritra Karaiba tao anatin'ny 14 andro lasa, dia hatokana ho an'ny 14 andro amin'ny fahatongavany. Hotsaraina ny mpitsabo arak'asa rehefa tonga izany, na dia afaka madi-tena na amin'ny tobim-pahasalamana tantanan'ny governemanta io.
Naato avokoa ny dia rehetra tsy ilaina amin'ny mpiasam-panjakana mandritra ny 30 andro. Ankoatr'izay, ny mponina ao Anguilla dia entanina mba hisoroka ny dia tsy ilaina rehetra any ampitan-dranomasina amin'izao fotoana izao.
Ny sekoly, izay efa nikatona tamin'ity herinandro ity, dia hakatona mandra-pahatongan'ny zoma 3 aprily 2020.
Entanina ny olona tsy hiangona, ao anatin'izany ny any am-piangonana, amin'ny ligin'ny fanatanjahantena, ny fivoriana politika, ny fivorian'ny tanora, ary amin'ny hetsika fanaovana fanatanjahan-tena rehetra.
Nasiana laharam-pahamehana maika 24 ora ho an'ny besinimaro mitady vaovao momba ny COVID-19 sy ho an'ireo olona mahatsapa fa voan'ny COVID-19 izy ireo. Ny isa dia 1-264-476-7627 na savony 1-264-476.
Ny Minisiteran'ny Fahasalamana any Anguilla dia manao fampielezan-kevitra amin'ny fomba mahery vaika sy fanitarana ny fidiovana ara-pisefoana ho fisorohana / fifehezana lehibe mifantoka amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny ankizy ankoatry ny sarambabem-bahoaka, mampiasa radio, jingles ary PSA ary media sosialy.
Fanasana matetika matetika, indrindra aorian'ny fifandraisana amin'ireo olona marary sy ny tontolo iainany.
Mandrakotra ny kohaka sy mievina amin'ny tavy azo ovaina na ao anaty fivontosana
Fisorohana ny fifandraisana amin'ireo olona mijaly na mampiseho soritr'aretin'ny aretin'ny taovam-pisefoana toy ny gripa, kohaka ary sery.
Manome toky fa diovina sy diovina ny habaka iarahana sy ny sehatry ny asa
Mametra ny fifandraisana ara-batana amin'ny hafa, ao anatin'izany ny tsy fandraisana tànana na fiarahabana ara-batana ary
hialana amin'ny vahoaka.
Alemanina: mpizahatany 120,000 80,000 tafahitsoka no nampodiana an-tanindrazana, XNUMX XNUMX hafa no handeha